Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Onye isi nchịkwa ọhụụ nke iN2L kwupụtara
iN2L, onye na-ebute ụzọ nke ngwọta ntinye aka dijitalụ ahaziri maka ndụ ndị agadi, nwere obi ụtọ ịkpọsa mgbakwunye Tim Jones dị ka VP ọhụrụ nke Ahịa. N'ime ọrụ ya, Jones ga-akọrọ Lisa Taylor, CEO nke iN2L, iji chụpụ atụmatụ ịzụ ahịa nke na-eto eto nke ụlọ ọrụ ahụ ma nyere aka mee ka atụmatụ uru ya dị ogologo oge na-aga n'ihu n'ahịa dị ndụ.
Taylor kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ịnabata Tim n'òtù ahụ ka anyị na-aga n'ihu na ebumnuche anyị imeziwanye ahụmịhe ịka nká." "Dịka onye isi ahịa na ngwọta ntinye aka dị ndụ, anyị chọrọ onye na-ere ahịa dị ike na ọhụụ dị ka Tim ka ọ malite anyị n'oge uto nke ọzọ. Ọkachamara ya miri emi n'ịrụ ọrụ usoro ịre ahịa ga-aba uru nye iN2L. "
Tim wetara ihe karịrị afọ 20 nke ahụmịhe na ahịa teknụzụ ahụike na iN2L. Atụmatụ ahịa ya sara mbara na-elekwasị anya n'otu aka ahụ na-ebuwanye ibu azụmahịa ọhụrụ, ebe ọ na-emepe njikwa akaụntụ na-arụsi ọrụ ike yana mmemme njide ndị ahịa. Na nso nso a, dị ka VP nke Enterprise Sales na Relias, Tim lekọtara atụmatụ na atụmatụ mmepe azụmahịa ogologo oge.
Jones kwuru, "akụkụ n'ihi ọrịa na-efe efe, akụkụ ụfọdụ n'ihi mgbanwe uche na-agbanwe, ahịa ndị agadi nọ n'oge ihe ọhụrụ na mgbanwe dị egwu," Jones kwuru. "Enwere ike dị ukwuu maka ito eto - ọkachasị dịka ụzọ ntinye aka dijitalụ nwere ike isi kwalite njikọ, afọ ojuju na ọdịmma dị ukwuu n'etiti ndị bi n'obodo. Enwere m nsọpụrụ inyere m aka itolite irute iN2L ka ha na-emepụta ụzọ ọhụrụ iji zụlite mmekọrịta bara uru na mmezu nke onwe n'etiti ndị agadi anyị. "
N'iji mesie ike na ezi uru okike, nkà ihe ọmụma ahịa Jones gbanyere mkpọrọgwụ n'iwepụta mmejuputa iwu, usoro na nkwalite njikọ aka na-aga n'ihu. Ụzọ ya gbadoro ụkwụ na itinye ego na mmekọrịta siri ike nke onwe, karịsịa n'etiti ebe kọntaktị ndị ahịa, ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa, na ahịa.
"Tim na-eme ka ọnọdụ ahụ dị elu. Ike ya dabere na ibuli otu nke ya gaa n'ọkwa dị elu nke ịga nke ọma," Taylor kwuru. "Anyị na-achọsi ike ịhụ ka nkà onye ndu ya pụrụ iche si eme ka ikike anyị wepụta ọkwa ọhụrụ nke ahụmịhe ndị ahịa."